'अनलाइन फुड फेस्टिवल मार्फत फूड डेलिभरीको बजार बिस्तार र प्रबर्द्धन गर्दैछौं' - Technology Khabar
» ‘अनलाइन फुड फेस्टिवल मार्फत फूड डेलिभरीको बजार बिस्तार र प्रबर्द्धन गर्दैछौं’
नेपालमा अनलाइनमार्फत खानेकुराहरु समेत अर्डर गर्न सकिन्छ र त्यसको व्यवसाय संचालन गर्न सकिन्छ भन्ने अवधारणा शुरु र स्थापित गराएको फुडमाण्डूले हाल अनलाइन फुड फेस्टिवल आयोजना गरिरहेको छ । एक दशक पार गरेको कम्पनीले आफ्नो तेस्रो अनलाइन फुड फेस्टिवल आयोजना गरिरहँदा यो पटक पर्यटकिय नगरी पोखरालाई समेत जोड्न सफल भएको छ।
कोभिड १९ महामारी पछिको समयमा अन्य व्यवसायहरु प्रभावित हुँदा फुडमाण्डूले आयोजना गरिरहेको अनलाइन फुड फेस्टिवलमा ग्राहकहरुको आकर्षण कस्तो छ र के के अफर उपलब्ध छन् भन्ने बारेमा हामीले फुडमाण्डूका ब्राण्ड, मार्केटिङ एण्ड सेल्स प्रमुख श्याम मालीसँग कुराकानी गरेका छौं ।
हाल संचालन भईरहेको अनलाइन फुड फेस्टिवलको अवस्था कस्तो छ ? माग र उपभोक्ताहरुको रुचीहरु ?
हाल चलिरहेको फुडमाण्डू अनलाइन फुड फेस्टिवलको अहिलेसम्मको डाटा हेर्दा ग्राहकहरुमा छुट्टै आकर्षकण देखिएको छ । अरु दिनको भन्दा ७० प्रतिशत भन्दा बढि ग्राहकहरुले यस अनलाईन फुड फेस्टिवलको अनुभव लिईरहनुभएको छ । ग्राहकहरुको सधैझै अफरहरुमा नै रुचि देखियो यस पालि पनि । त्यसमा पनि मिस्ट्री ब्यागको माग बढी देखियो । रु.१ सधैझै आकर्षणको विन्दु त छँदैछ । त्यसबाहेक उपभोक्ताहरुले अनलाईन गेम पनि अत्यधिक खेलेको पाईएको छ । यसमा पनि अग्मेन्टेड रियालिटी गेम (Augmented Reality) सबैले रुचाईएको पाईयो ।
यसको लागि अब ३ दिन मात्र बाँकि छ र हाम्रो मिस्ट्री ब्याग यो वर्ष सबैभन्दा धेरै हिट भएको छ । हामीले मिस्ट्री ब्यागलाई यस पटक हरेक दिन सबैभन्दा धेरै बिक्री गरेका छौं। हाम्रो फ्ल्याशसेल विशेषगरि बियर, रम र भोड्कामा अनुमान भन्दा धेरै अर्डर आएको छ।
ग्राहकहरुले फुडमाण्डूकै अनलाइन फुड फेस्टिवल नै किन कुर्ने गर्दछन् ?
अनलाइन फुड फेस्टिवल अरु अनलाइन फेस्टिवल भन्दा हरेक प्रकारबाट भिन्न छ । हामीले अफलाईन कार्निभललाई नै डिजिटल फर्म्याटमा ढाल्न खोजेका छौं। ग्राहकहरुले एक पटक अनलाईन फेस्टिवल जानु भयो भने आफै अनुभव गर्न सक्नुहुनेछ । यसमा विभिन्न प्रकारका अफरहरु जस्तै फ्ल्यास सेल, मिस्ट्री ब्याग, रु१ मा खानाका साथै विभिन्न अनलाईन गेमहरु अग्मेन्टेट रियालिटी, ब्हील अफ फर्चुन, बाईक डेलिभरी च्यालेन्ज, ट्रेजर हण्ट आदि खेल्न र भौचर जित्न सक्नुहुनेछ । यसका साथै क्यूआर पेमेन्ट वा कार्डबाट अनलाईन पे गर्दा २५ प्रतिशत (वा रु५००) सम्मको क्यासब्याक वा डिस्काण्ट पनि पाउन सक्नुहुन्छ।
यसपटक फेस्टिवललाई थप आकर्षण गर्न अनलाईन लाईभ म्यूजिक इभेन्ट पनि राखिएको छ । ग्राहकले घरैबसी हेभी डिस्काउण्टमा खाना अर्डर गर्दै अनलाईन गेमहरुको र अनलाईन लाईभ म्यूजिकको मजा लिईरहेका छन् ।
के यसले आगामी दिनमा अनलाइन फुड डेलिभरीलाई सहयोग पुर्याउँछ ?
यो उत्सवको हाम्रो मूख्य उद्वेश्य नै अनलाईन डेलिभरीको बजार बिस्तार र प्रबर्द्धन गर्नु हो । यसका साथै अहिलेको कोभिडको अवस्थाले गर्दा सबैजनालाई रमाईलो गर्ने बहाना चाहिएको छ । र मलाई लाग्छ यो उत्सवले केहि हदसम्म उहाँहरुको जिवनमा उमंग ल्याएको छ ।
त्यसैले हाम्रो उद्धेश्य मानिसहरुलाई इभेन्टमा मात्र मनोरन्जन दिनु नभई संभावित ग्राहकहरुलाई फुडमाण्डूको बारमा जानकारी समेत दिनु हो । यसले दैनिक तपाईँको फुड डेलिभरीको आवश्यकताको बारेमा सचेत बनाउँदै धेरै भन्दा धेरैलाई सहयोग गर्दछ ।
फुडमाण्डू र अन्य प्रतिस्पर्धीहरु बीच के फरक छ ?
फुडमाण्डू यस ईण्डष्ट्रीको एउटा पायोनियर ब्राण्ड हो । १० वर्षको समयमा हामीले थुप्रै उतारचढावका साथसाथै धेरै अनुभव बटुलिसकेका छौं। हाम्रो सबभन्दा ठूलो शक्ति भनेकै हाम्रो पार्टनर रेष्टुरेन्ट र ग्राहकहरुसँगको गाढा सम्बन्ध हो । जुन हामीले यो एक दशकको यात्रामा कमाउन सक्यौं ।
हामीले यो एक दशकमा ग्राहकहरुको चाहना र रुचीलाई नजिकबाट बुझेका छौं र त्यसले हाम्रो भविश्यलाई मार्ग दर्शन गरिरहेको छ जून अन्य प्रतिस्पर्धीहरुसँग छैन् । त्यसैगरि हामीले कठिन अवस्था र समयहरु पनि भोगेका छौं जसले हामीलाई थप मजबुत बनाएको छ । यो बीचमा हामीले हाम्रो टिम भित्र पनि ससक्त नेटवर्क र संस्कृतिको विकास गरेका छौं जसले निरन्तर गति प्रदान गर्दछ ।
नेपालमा अहिले अनलाइन फुड डेलिभरीको व्यवसाय कस्तो छ ?
विगत दुइ तीन वर्षदेखि अनलाईन डेलिभरीको व्यवसायमा राम्रो सुधार आएको अनुभव गरेको छु । इन्टरनेटको सहज पहुँच, ब्यस्त जीवन, बढ्दो शहरीकरण र आधुनिक जीवनशैलीका कारणले पनि होला अनलाईन डेलिभरीमा उल्लेख्य सुधार आएको छ । कोभिडका कारणले पनि धेरैहदसम्म यो व्यवसाय फस्टाउन सक्यो । अनलाईन फुड डेलिभरीको व्यवसायको भविष्य एकदम राम्रो देख्छु ।
कोरोना भाइरस महामारीले हाम्रो दैनिकीलाई अझैपनि अस्तव्यस्त बनाएको छ तर पनि यसले अनलाइन फुड डेलिभरीको व्यवसायलाई भने फस्टाउने मौका दिएको छ । हामीले यसलाई सकारात्मक रुपमा र प्रतिस्पर्धी बजारको रुपमा लिएका छौं । जसले गर्दा स्वस्थ खानेकुरा र सरसफाईमा अझ बढि ध्यान दिन सकेका छौं ।
विश्वभर फुड डेलिभरी कम्पनीहरुको व्यवसाय बढिरहेको छ तर नेपालमा भने त्यस्तो देखिँदैन किन् ?
त्यसो होईन्, नेपालमा पनि अनलाईन फुड डेलिभरीको व्यवसाय राम्ररी नै बढिरहेको छ । जुन द्रूत गतिमा विश्वबजारमा वा छिमेकी राष्ट्र भारतमा बढेको छ, त्यति नभएपनि आशालाग्दो गतिमा चाहि विकास भैरहेको छ ।
नेपालमा सिमित शहरी क्षेत्र र केहि शहरहरु मात्र भएको कारणले गर्दा थोरै मात्रा मानिसहरु अनलाइनबाट खानेकुरा अर्डर गर्दछ । अझ कति मानिसहरुलाई हामीले थप जानकारी दिनुपर्नेछ । तर कोभिड पछि भने मानिसहरु डिजिटल फ्रेण्डली हुँदै गएको हुँदा हामीलाई सजिलो भएको छ ।
त्यसैगरि प्रतिस्पर्धाले पनि जागरुकता र व्यापार बढाउन सहयोग गर्दछ। जसले हाम्रा ग्राहकहरुलाई थप सचेत बनाउँछ भने आगामी दिनमा म थप फुड डेलिभरी व्यवसायहरु आउने संभावना देख्दछु । सरकारको डिजिटल नेपालको अवधारणालाई साकार पार्न अनलाइन फूड डेलिभरीको व्यवसायमार्फत हामी समेत प्रयत्नरत छौं ।
यस व्यवसायमा कस्तो चुनौतीहरु भोग्नुभएको छ ?
सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको हाम्रो लागि संरचनागत अभाव हो । अझ हाम्रो जस्तो मुलुकमा त हरेक पाईलामा समस्याहरु भोग्नुपर्दछ । हाम्रो अर्को चुनौती भनेको उपभोक्ताहरुलाई हाम्रा सेवाहरुले उनीहरुको दैनिक जिवनलाई कसरी सहज बनाउँछ भनेर शिक्षित र जानकारसमेत बनाउनुपर्नेछ । यसको लागि हामीले मात्र गरेर पुग्दैन सरकारले समेत सहजिकरण गर्नुपर्दछ र सामूहिक सहयोगको आवश्यकता पर्दछ ।